40KW imodyuli esebenzayo yokutshaja abavelisi, abaXhasi - China 40KW imveliso yokutshaja ngokufanelekileyo
I-UR75053-E imodyuli yokutshaja ye-EV eyenzelwe ngokukodwa itshaja enkulu ye-EV DC. Inoluhlu olubanzi lwevolthi yokuphuma kwamandla rhoqo. Ikwanayo namandla ombane aphezulu, ukusebenza okuphezulu, amandla oxinano aphezulu, ukuthembeka okuphezulu, ulawulo olukrelekrele kunye nembonakalo entle. Iindlela ezishushu ezinokutsha kunye nezikrelekrele zolawulo lwedijithali zisebenza kunye ukukhusela kwangaphambili ukusilela kunye nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
Imodyuli yokutshaja ye-UR50080-W EV eyenzelwe ngokukodwa itshaja enkulu ye-EV DC. Inoluhlu olubanzi lwevolthi yokuphuma kwamandla rhoqo. Ikwanayo namandla ombane aphezulu, ukusebenza okuphezulu, amandla oxinano aphezulu, ukuthembeka okuphezulu, ulawulo olukrelekrele kunye nembonakalo entle. Iindlela ezishushu ezinokutsha kunye nezikrelekrele zolawulo lwedijithali zisebenza kunye ukukhusela kwangaphambili ukusilela kunye nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.